Shiinaha Runjin © Krunt ™ -2000 Soosaarida Mashiinka Mashiinka iyo Warshadda | Runchen
Ku rid gunta miraha la qalajiyey, granule sonkor ama dareeraha dareeraha ah jalaatada. (qalabku kuma haboona aalado viscous, iyo sidoo kale kuwa si fudud u nuugaya qoyaanka ama u fududahay in la xayeysiiyo)
Mashiinka ayaa kaxeeya furitaanka qiyaasta si uu u gudbiyo granules si xasilan oo wax ku ool ah oo loogu daro jalaatada iyada oo loo marayo mashiinka muraayadaha, kaas oo isku daraya granules-ka iyo jalaatada isku-dhafka ah ee isku-darka isku-darka leh xawaaraha joogtada ah. Mashiinka quudinta Vane waxaa lagu hagaajiyaa mitirka dhererka.
MirahaTM-2000 waa Quudinta Qudaarta miraha waxayna si buuxda u buuxisaa baahiyaha nadaafadda cuntada. Qalabku wuxuu ka kooban yahay kombaresarada qaboojiyaha oo tayo sare leh iyo qaybo tayo sare leh, oo loogu talagalay inuu buuxiyo heerarka adag ee nadaafadda, kalsoonida iyo adkeysiga. Dhammaan qaybaha la xiriira jalaatada waxay ka samaysan yihiin 304 bir bir ah. Waxaa ku qalabeysan tuubbo, si sahlan loo dhaqaajiyo loona rakibo.
Koob iyo koob tiro ah
Hopper-ka, waxaa ku jira qalab isku dhafan si loo hubiyo in furitaanka tirada uu si xasiloon u quudin karo gunta miraha. Mashiinka xaddiga ayaa quudin kara gunta miraha godka mashiinka quudinta ee daloolka. Xawaaraha qiyaasta qiyaasta ayaa lagu hagaajin karaa inta udhaxeysa 0% iyo 100%.
Bamka quudinta Vane
Mashiinka quudinta wuxuu ka kooban yahay giraangiraha wadista daabku wuxuuna si isku mid ah ugu dhex qasan karaa guntanka miraha galka jalaatada laga soo saaray mishiinka qaboojiyaha nidaamka joogtada ah. Inta lagu jiro wareegga daabku, wuxuu si sax ah u xidhi karaa albaabka lagu tuurayo qulqulka miraha, sidaa darteed isbadalka jalaatada ayaa looga soocayaa hareeraha hareeraha. Inta lagu guda jiro wareegga iyo wareegga giraangiraha gawaarida, markii daabku gaaro gaaska jalaatada, si otomaatig ah ayuu dib ugu laaban doonaa giraangiraha wadista, isla mar ahaantaana, wuxuuna dhigayaa gunta miraha. Qawaaniinta stepless waxaa loo samayn karaa xawaaraha socodka ee giraangiraha baabuurta iyada oo loo marayo potentiometer ah
Hawlgallada Mashiinka Isku qasidda Khudradda
Aad ayey u habboon tahay oo si toos ah ayaa loo shaqeyn karaa ka dib marka korontadu daaran tahay.
CIP nadiifinta khadka tooska ah
Hawlgalka gudiga hawlgalku si otomaatig ah ayuu u bilaabi karaa habka nadiifinta CIP, si bamka quudinta iyo qaybta isku dhafan loogu hagaajin karo nadiifinta hore ee hore ee warshaddii hore, si markaa loo fududeeyo ka saarista qalabka isku dhafka iyo furitaanka tirada, si loo qaado nadiifinta gacanta.
Iyada oo loo marayo xulashada kala-soocidda tirada kala duwan, MirahaTM-2000 waxay soo saari kartaa 8 ～ 200L / saac oo walxo ah qayb kasta.
Qaybaha kale ee dayactirka
Waxyaabaha farsamada Halbeegyada Faallooyin
Mashiinka qasaaya 0.75 KW
Mashiinka bamka Vane 1.1 KW
Wadarta awoodda 2.75 KW
Quudinta tuubada, dibedda 51 mm 2 "Hoop
Tuubada tuubada, dibedda 51 mm 2 "Hoop
Hore: Runjin © Krunt ™ -RM35 Mashiinka Jalaatada